मैले जितेमा यसो गर्छु-खेलराज पाण्डे,बुटवल कांग्रेस-अन्तरर्वार्ता:lumbinireview
मैले जितेमा यसो गर्छु-खेलराज पाण्डे,बुटवल कांग्रेस-अन्तरर्वार्ता
प्रमुख पदका उमेदवार, नेपाली काग्रेस बुटवल
कस्तो छ चुनावी माहोल ? मतदाता के भन्छन् ?
चुनावी माहोल नीकै राम्रो छ । यसै पनि नेपाली कांग्रेसलाई माया गर्ने धेरै हुनुहुन्छ बुटवलमा । यसैमाथि पटक पटक पाटीको नगर सभापति भएर काम गरेको म उमेदवार बनेको छु । उहा“हरु कांग्रेसले सही मान्छे छनोट गर्यो । तिम्रो जीत सुनिश्चित छ भन्नुहुन्छ । मलाई पनि लाग्छ जीतको अबिर लगाउन मात्रै बाकी हो ।
तपाईका जीत्ने आधार के हुन् ? किन तपाईलाई मत दिने ?
म काग्रेसको निष्ठावान सिपाही मात्रै होइन नगरमा पटक पटक दलीय संयन्त्रबाट समन्वय गरेर यहा“का विकास योजनादेखि कार्यान्वयनतहमा टोल टोल र चोक चोकमा गएर हुर्ने व्यक्ति हुं । यहांका सबैजसो टोल विकास समिति, वस्ती विकास समिति, वडानागरिक मञ्च, उपभोक्ता समिति लगायतका सुखदुःख बुझेर सहजीकरण गर्ने मौका मैले पाएको छु । समन्वय मात्रै गर्दा त मैले धेरै गरे जनप्रतिनिधि हुदा त आकाश पाताल फरक पर्ने छ । त्यो जमातले मलाई भोट हाल्ने छ । ठूलो हिस्सा ओगटेको सुुकम्वासी समुदाय, उद्योगवाणिज्य संघ लगायतमा आवद्ध उद्योगी व्यवसायी पनि मेरो पक्षमा छ । सरकारमा नेतृत्व गरेको दल र जनमुक्ति पनि साथमा छ । यी मेरा जित्ने आधार हुन् ।
उमेदवारहरु चुनावमा जनतालाई नीकै ठूला सपना बाड्छन् । तपाई पनि त्यसै गर्नुहुन्छ होला । तपाईले जितेमा चाहिं के फरक पर्ला बुटवलमा ?
मैले जितेमा बुटवलमा सबैभन्दा पहिले सुकम्वासी समस्या समाधान गर्छु । वसोवासका आधारमा उहाहरुले लालपुर्जा पाउनु हुनेछ । तिनाउ र दानव नदी बुटवलवासीका लागि अभिषाप र वरदान बनेका छन् । बुटवलवासीका लागि वरदान मात्रै बनाउन उचित व्यवस्थापन गर्नेछु । मोतीपुर औद्योगीक करीडोरलाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउने छु । लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति हुनेछ । रोजगारकालागि औदोगीक र व्यवसायीक हव बनाइने छ । बुटवललाई सफा स्वच्छ र हरियाली बनाउने दीर्घकालिन योजना बनाएर काम गर्नेछु । सिंगो बुटवलको सन्तुलीत विकास हुनेछ । मोतीपुर र सेमलारमा पनि ठूला विकासका योजना जानेछन् । बुटवललाई उप महानगरपालिकामा जान पुर्वाधार तयार गर्नेछु ।
सपना त निकै देखाउनु भो । जित्नु पनि होला । जीतिहाले पनि यतिका सबै कुरा ५ वर्षमा गर्न सम्भव छ त?
अवश्य सम्भव छ । हामी दैनिक, साप्ताहिक र मासिक योजनासहित काममा खट्ने छौ“। सेवाप्रवाहलाई छिटो छरितो र जनता केन्द्रित तथा विकास केन्द्रित गर्ने छौं“ । आयका स्रोतहरु बढाउने छौ“ । यसमा उप महानगरपालिकाका कर्मचारी र बुटवलवासीको साथ रहने छ ।
माओवादी केन्द्रसितको तालमेल चाहि किन ? चुनाव जित्नैका लागि हो हैं । चुनाव जित्न कतै माओवादी केन्द्र र कतै राष्ट्रिय जनमुक्ति सबैसित मोर्चाबन्दी गर्नुभाछ? यो सुहाउदो कुरा हो र?
तालमेलको सबैभन्दा ठूलो अर्थ चुनाव जित्ने नै हो तर त्यत्ति मात्रै होइन । बुटवलमा अहिलेसम्म रहेको एमालेको वर्चस्व हटाउन हो । पाटी कार्यालयका रुपमा रहेको उप महानगरपालिकालाई सबैको साझा र समावेशी बनाउन हो । बाहिर हामी ३ पाटीबीच तालमेल देखिन्छौं । यो अभियानमा धेरैको साथ छ । धेरै साना पाटीले पनि हामीलाई समर्थन हुर्नुहुनेछ । समर्थन गर्ने वाचा गर्दै हुनुहुन्छ । अर्को कुरा केन्द्रिय सरकार तालमेलले चल्छ भने स्थानीय किन नचल्ने यो हाम्रो प्रतिप्रश्न हो ।
यो अन्तरर्वार्ता फरक पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
अन्तर्वार्ताबाट अन्य समाचार
चन्द्रकिशोर-जसले तोड्न हैन जोड्न लेख्छन् । पढ्नोस् बिशेष वार्ता
बिकास र समृद्धिको यात्रा शुरु-पौडेल(वार्ता)
के गरे ज्ञवालीले ? के गर्नेछन् अब ?(वार्ता)